Momba anay - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Ny Fiangonan'Andriamanitra Maneran-tany raha atao hoe WKG, amin'ny teny anglisy dia "Fiangonan'Andriamanitra Maneran-tany" (hatramin'ny 3. Aprily 2009 fantatra any amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao amin'ny anarana hoe "Grace Communion International"), dia naorina tany Etazonia tamin'ny 1934 ho "Radio Fiangonan'Andriamanitra" nataon'i Herbert W. Armstrong (1892-1986). Amin'ny maha-mpanao dokam-barotra sy mpitory teny voatendry ao amin'ny Fiangonan'Andriamanitra amin'ny andro fahafito, Armstrong dia mpisava lalana tamin'ny fitoriana ny filazantsara tamin'ny alàlan'ny radio ary nanomboka tamin'ny 1968 tao amin'ny fahitalavitra "The World Tomorrow". Gazety "The Plain Truth", izay natsangan'i Armstrong tamin'ny 1934 ihany koa, dia navoaka tamin'ny teny alemà nanomboka tamin'ny 1961. Voalohany amin'ny maha-“The Pure Truth” ary avy amin'ny 1973 ho “Clear & True”. Tamin’ny 1968 dia niorina tao Zurich ny kongregasiona voalohany tany Soisa miteny alemà, ary tao Basel, fotoana fohy tatỳ aoriana. Tamin’ny Janoary 1986, i Armstrong dia nanendry an’i Joseph W. Tkach ho mpitandrina jeneraly mpanampy. Taorian'ny nahafatesan'i Armstrong (1986), Tkach Senior miadana ...
The Worldwide Church of God for short WKG, English Worldwide Church of God (hatramin'ny 3. Aprily 2009 Grace Communion International), dia niova toerana tato anatin'ny taona vitsivitsy momba ny finoana sy fanao efa ela. Ireo fiovana ireo dia nifototra tamin’ny fiheverana fa ny famonjena dia avy amin’ny fahasoavana, amin’ny alalan’ny finoana. Na dia efa nitory izany aza isika taloha, dia mifamatotra hatrany amin'ny hafatra izay ananan'Andriamanitra antsika amin'ny asantsika izay ...
Joseph Tkach dia Mpitandrina jeneraly ary filohan'ny filankevi-pitantanan'ny "Fiangonan'Andriamanitra Maneran-tany", na WKG raha fintinina. Koa satria 3. Tamin'ny Aprily 2009 dia novana anarana hoe "Grace Communion International" ny fiangonana. Dr. Tkach dia nanompo ny Fiangonan'Andriamanitra Maneran-tany amin'ny maha-mpitandrina voatokana azy nanomboka tamin'ny 1976. Nanompo ireo vondrom-piarahamonina tao Detroit, Michigan izy; Phoenix, Arizona; Pasadena sy Santa Barbara-San Luis Obispo. Ny rainy, Joseph W. Tkach Sr., dia nanendry ny Dr. Tkach ho...
Misy ny olona milaza fa ny teolojia momba ny Andriamanitra telo izay iray dia mampianatra universalism, izany hoe ny fiheverana ho voavonjy ny tsirairay. Satria tsy maninona na tsara na ratsy izy, mibebaha na tsia na nanaiky izy na nandà an'i Jesosy. Ka tsy misy afobe. Misedra olana roa aho amin'ity tenim-paritra ity, izay tsy fahombiazana: Voalohany, ny finoana ny Andriamanitra telo izay iray dia tsy mitaky aminao ...
Ny iraka ampanaovin'izao tontolo izao an'Andriamanitra (WKG) dia ny miara-miasa amin'i Jesosy hiaina sy hitory ny filazantsara. Ny fahatakarantsika an'i Jesôsy sy ny vaovao tsaran'ny fahasoavana dia niova fototra tamin'ny fanavaozana ny fampianarantsika tamin'ny folo taona farany tamin'ny taonjato faha-20. Izany dia nitarika ny fisian'ireo WKG ankehitriny izay ampiharina amin'ny foto-pinoana ao amin'ny Baiboly kristiana-ortodoksa ...